आज निर्जला एकादशी - bampijhyala.com
Home > कला/ साहित्य > भाषा/ संस्कृती > आज निर्जला एकादशी
७ असार २०७८, सोमबार ११:४० bampijhyala
बाँपीझ्याला, काठमाण्डौं । वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले आज सोमबार आ–आफ्ना घरको मठमा तुलसीको दल राख्दै छन् । प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीका दिन घरघरमा तुलसीको बीउ रोपिन्छ । सोमबार निर्जला एकादशीमा रोपिएको बीउ एक महिनापछि आषाढ शुक्ल एकादशी अर्थात हरि शयनी एकादशीका दिन रोपिन्छ ।
आषाढ शुक्ल एकादशीदेखि कात्तिक शुक्ल एकादशीका दिनसम्म तुलसीको विशेष पूजा गरिन्छ । यसलाई तुलसी हुर्काई बढाई दामोदरसँग विवाह गरिने भन्ने पनि बुझिन्छ । यो चार महिनालाई चतुर्मास भनिन्छ । स्नान, पूजन र दान गर्नाले मनोकाङ्क्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । सोमबार पानीसमेत नपिई व्रत गर्नाले अभीष्ट फल पाइने शास्त्रीय वचन रहेको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा. डा. रामचन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
आयुर्वेदिक रूपमा पनि लाभकारी औषधि तुलसी विभिन्न रोगको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । तुलसीमा धेरै अक्सिजन पाइने आधुनिक विज्ञानले समेत प्रमाणित गरेको छ । नयाँ रूप परिवर्तनसहितको कोरोना महामारी चलेका बेला घरघरमा तुलसीको दल राख्दा र रोपण गर्दा रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने आयुर्वेद चिकित्सक डा। शेषराज आचार्य बताउँछन् । तुलसीलाई चियाका रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
आज दोलखामा थप ३४ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि ७ असार २०७८, सोमबार ११:४०
‘सम्झिनी पानी छम्किनी’ भिडियोमा दीपा र भुवनको रोमान्स ७ असार २०७८, सोमबार ११:४०
लघुकथा–पढ्ने रहर ७ असार २०७८, सोमबार ११:४०
पछिल्लो चरणमा कोभिड १९ को संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले सचेत रहन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय दोलखाको अपिल ७ असार २०७८, सोमबार ११:४०
सर्वोच्च अदालतले सरकारी सेवामा हुने आरक्षण जातीयताको आधारमा नभइ आवश्यकताको आधारमा गर्नुपर्ने फैसला ७ असार २०७८, सोमबार ११:४०